DIINQA OROMOO KUTAA 4FFAA-Dr. Gizaachoo Teessoofi Beekan Gulummaa – Beekan Guluma Erena
DIINQA OROMOO KUTAA 4FFAA-Dr. Gizaachoo Teessoofi Beekan Gulummaa	Beekan Erena
Poems December 21, 2016
DIINQA OROMOO KUTAA 4FFAA-Dr. Gizaachoo Teessoofi Beekan Gulummaa
AS TUQI DHAGGEEFFADHU
MATA DUREE MARII
BABAL’INNI MAGAALAAFI WARSHAA MAQAA MISOOMAATIIN DEEMU, AKKAMITTIIN AFAAN, AADAAFI EENYUMMAA OROMOO MIIDHA?
1. Dr. Gizawu Teessoo, mee dhaggeeffatoota keenyaa qophii ‘DIINQA OROMOO’ waliin walbari. Dr. Gizaw eenyu? Lafa dhalootaa, adeemsa barnootaafi bu’aa ba’ii irra deemtee as geese/jirtu irraa waa nuuf himi. Dr. Gizaw maaliif Gizwu jedhame? Maaliif Bulchaa yookaan Mooti/Mootummaa hinjedhamne? Haalli moggaasaa maqaakee kun maalirraa ka’eeti?
2. Egaa gara ijoo marii keenyaatti yoo deebinu, ati ogeessa/qorataa dhimma babal’ina magaalaa (urban study/development) ti. Qixa sanaan miidiyaalee garaagaraan waa baay’ee dabarsaa turteetta. Mee faayidaafi miidhaa babal’ina magaalaawwan biyya Oromiyaa keessa adeemaa jiran hariiroo afaan, seenaafi aadaatiin walqabsiisiiti dhaggeeffatoota keenyatti nuuf himi.
3. Babal’inni warshaale Oromiyaa keessaa (warshaa saamunaa, warshaa daraaraa, warshaa bishaanii…) akka waliigalaatti maqaa misoomaatiin ta’iiwwan Oromiyaa keessa adeemaa jiran kunneen Afaan sabni sun dubbaturratti akkamiin dhiibbaa akkamii akka qabu nuuf ibsi?
4. Afaan/aadaan bade jechuun maal jechuudha? (Daguuggaan Sanyii)/Genocide? ..sadarkaan duguuggaa sanyii akkamiin ibsama? Mee uummanni Walloofi Raayyaa, Bahardar/Liban ..debiremarqos kun aadaa mana keessaa qabu jedhama?..Namoota waan aadaafi seenaa qoratanirratti Impaayerri Itoophiyaa kun Murni TPLF n geggeeffamaa jiru kun maaf dhiibbaa hamaa geggeessa sitti fakkaata? Fakkeenyaaf, kan akka abbaa keenyaafi beekaa sirna gadaa Obbo Dabbasaa Guyyoo dhabamsiifamee jira. Namoonni baay’een dhimma afaaniifi aadaaf seenaarratti dalagan hidhamaa, ajjeefamaadha jiru. Seenaa keessatti waa’ee ijaaramuufi dhabamuu waldaa maccaafi Tuulamaas niyaadanna.haalli kun akkamiin sirna daguuggaa sanyii (genocide) waliin walqabata?
3. Daba seenaa dalagamaa jiru keessaa tokko warri Habashaa kun jaarraa 16ffaa keessaa lafa keenyaarraa Oromootu nudhiibe malee lafti kun keenyaa jechaa jiru, fakkeenyaaf lafti wallaggaa (naannoo Shaggar) keenyumaa jechaa jiru. Gama biraan ammo Oromoon lafti sunuu keenyaa, uummata Oromoo kan Afaan Oromoo dubbatutu irra jiraataa ture; Liibaan (kan isaan amma Bahir Dar jedhan) Debiremarqos ammaa kunis, Gondor dabalatee Oromootu bulchaa turee kan jedhutu jira. Mee waan kana gosa Oromoo lafa sanarra jiraataa tureen waan kana nuuf dhugoomsi.
4. Afaan ..Naannoo/Qe’ee /Qubsuma/aadaa yookaan eenyummaan isaan kun boondii/caancala adda ba’uu hindandeenyedha jedhama. Mee waan akan akkamiin ibsita? Tokko dhabamuun isa biraarratti dhiibbaa qabaa?
5. Oromoon biyya qabaa? Biyya qabaachuu jechuun siif maal jechuudha?
# MASTER KILLER: Waa’ee Master Plan Finfinnee yaroo hedduu irra deddeebi’ee dubbadheen ture. Master Planiin kuni hindhaabbannee jedhee irra deddeebi’ee ibseen ture. Ammammoo, kan Master Plan caaluu dabalamee achii asi bahee jira. Rakkoon haaraan INDUSTRIAL PARK fii bishaan magaalaa Finfinneefi dhiheessuu irratti naannoo Sibiiluu fii Garbii jedhamutti cufuufi jedhanii misooma fakkeessanii magaalota hedduu Oromiyaa keessatti akka haaraatti ijaarrachuufi murteeffatanii jiru. Saba Oromoofi karaan itti gadi bahee ibsu media rakkoo guddaa natti tahee jira. Hangan guyyaa Media argadhee bali’inaan waliin mari’annutti karaan dura dhaabbachuu dandeenyu irratti sabni keenya mala fiduu qaba. Dura dhaabbachuu qofa otoo hintaane, biyya keenyaa fii hiree misooma keenya hanga abboommii keenya jala oolutti qabsoo walirraa hincinnee gaggeessuutuu dirqama keenya. Lafa kana irraa nuballeessuffi murteeffatanii ka’anii jiru. Murannoo fii jabina keenya agarsiisuu qabna!!! (Dr. Gizachoo Teessoo)
Prof. Hayilee Fidaa-Dhaadannoo ‘Yeneqqaa, Yetederajjee, Yetaaxeqee Hizb Yaashennifaal!!
Yeroo Lafti Qotee Bulaaf (land to the tiler) jedhamee labsame sana kana jedhan ..har’a Qotee bulaan Oromoo utuu sirbi jedhaniiniin maal jedhee sirba laata?
Abbaa Lafaa yaa gugguuftuu
Sareen Afaankeetti haadhuuftuu
Abbaa Lafaa Yaaqenneera
Darguun lafa nuuf kenneera
← DIINQA OROMOO 3ffaa- Saphaloo Kediriifi Beekan Gulummaa
DHAAMSA ARIIFACHIISAA-Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf! →